10 Signs And Symptoms Of Tuberculosis တီဘီလက္ခဏာ ဆယ်ခု - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
10 Signs And Symptoms Of Tuberculosis တီဘီလက္ခဏာ ဆယ်ခု
ဆရာ လူနာက နှာခေါင်းသွေးယိုလို့ ဆရာဝန်သွားပြတာပါ။ TB လို့ပြောပါတယ်။ ချောင်းလည်းမဆိုးပါဘူး။ သလိပ်စစ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းပြီး ဆရာဝန်က tb လို့ပြောပါတယ်။ ဆေး၆လသောက်ရမယ်တဲ့။ ကျမသိထားတာက ချောင်းဆိုးတာရှည် ကိုယ်အလေးချိန်မတတ်မှ tb လက္ခဏာ လို့သိထားတာပါ။ ကျမရဲ့အယူအဆမှားနေတာလား သိချင်လို့ပါ။
လူနာဆိုသူ အသက် မသိ။ ကျား-မ မသိ။
တီဘီရောဂါလက္ခဏာတွေစာတင်စဉ်က အနည်းဆုံး (၂) ဦးကနေ ချောင်းဆိုးတာ (၂) ပါတ်ကြာမဟုတ်လားလို့ ရေးလာတယ်။ ကျွန်တော့်စာမှာက ၃ ပါတ်။ ဆေးသုတေသနတွေက ယူအက်စ်အေနဲ့ ယူကေနိုင်ငံတွေကများလို့ ကိုးကားရတာမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ ပိုပြီးကိုက်ညီမှာကို အတွေ့အကြုံတွေအရ ချင့်ချိန်ရပါတယ်။
1. Fever ကိုယ်ပူခြင်း
100 F (37.8 C) ကျော် (၁ဝ) ရက်နေလို့မပျောက်ရင်
2. Coughing ချောင်းဆိုးခြင်း
(၃) ပတ်နေလို့မပျောက်ရင်။ (တီဘီအဖြစ်များတဲ့မြန်မာပြည်လိုနေရာမှာတော့ ၂ ပတ်နေလို့မပျောက်သေးရင်။)
3. Blood ချောင်းဆိုးသွေးပါခြင်း
ချောင်းဆိုးရင်း အမြှုပ်ထဲမှာ အနီရောင်သွေးနည်းနည်းပါလာရင်။
4. Chills ချမ်းခြင်း
5. Chest Pains ရင်ပတ်နာခြင်း
6. Night Sweats ညချွေးထွက်ခြင်း
7. Breathing Issues အသက်ရှူခက်ခြင်း
8. Feeling Tired မောပန်းခြင်း
သိသာတဲ့အကြောင်းတွေမသိဘဲ အားယုတ်ပြီး မောပန်းလာရင်။
9. Loss of Appetite အစားပျက်ခြင်း
10. Weight Loss ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
ကလေးတွေ အလေးချိန်မတက်ရင်၊ လူကြီးတွေ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာရင်။